Delete zvemukati zvinoonekwa se "zvimwe" muTunes? | IPhone nhau
Ini ndinobvisa sei zvemukati zvinoratidzika se "zvimwe" muTunes?
Chero bedzi Apple isingape iyo 32GB iPhone, iPad kana iPod seyesi modhi, idzi mhando dzekubvunza dzinowanzoitika. Vashandisi vane 16GB chishandiso vanogara vachifanira kutarisa maitiro ekuchengetedza kwavo uye maalarm ese achadzima pavanoona kuti pane nzvimbo yakawanda muchikamu che "vamwe" cheTunes. 1GB pane 32GB kana 64GB chishandiso inogamuchirwa, asi pane chishandiso che16GB inogona kuuya inobatsira kurekodha vhidhiyo, kuchengetedza mimhanzi kana kuisa maficha. Muchikamu chino tichataura nezve zvazviri uye maitiro ekuzviita bvisa zvemukati zvinoratidzika se "zvimwe" mu iTunes.
1 Chii chinosanganisirwa mu «zvimwe»
2 Maitiro ekudzima zvirimo zvinoonekwa se "zvimwe" muTunes
2.1 Uncheck otomatiki sync bhokisi
2.2 Kubvisa cache
2.3 Kuyedza imwe yakaverengwa zvakare
Chii chinosanganisirwa mu «zvimwe»
Chikamu che "vamwe" cheTunes chinosanganisira vanobatika, mameseji, MMS uye mamwe marudzi e cache yekushandisa. Kune zvakare data iro iTunes risingakwanise kuziva chero chikonzero.
Maitiro ekudzima zvirimo zvinoonekwa se "zvimwe" muTunes
Uncheck otomatiki sync bhokisi
Ichi chiito chakareruka chingangobatsira kudzosa imwe yenzvimbo inosara yakagara mu "vamwe." Inogona kushanda nekuti inomanikidza iTunes ku kuverenga zvakare nzvimbo nguva dzese dzatinobatanidza mudziyo wedu pakombuta. Tichaita zvinotevera:
Isu tinobatanidza iyo iPhone, iPod kana iPad kune komputa.
Isu tinosarudza chishandiso chedu kumusoro kuruboshwe.
Isu tinobvisa iyo "Synchronize otomatiki kana uchibatanidza iyi iPhone" bhokisi.
Kana iwe uchida kubvisa yakawanda nzvimbo, chimwe chinhu chatinogona kuita ndeichi clear application cache. Twitter, Facebook, WhatsApp, Teregiramu, nezvimwe, zvinogona kuchengeta mafoto, mavhidhiyo uye mamwe marudzi emagwaro anogona kutora nzvimbo yakawanda. Semuenzaniso, Teregiramu ine sarudzo yekubvisa cache vhiki rega rega uye, kunyangwe zvakadaro, ini ndinowanzove nemagigs mazhinji akabatikana.
Chinhu chakashata chekubvisa mapacheji ndechekuti inosetsa maitiro uye zvingangoita kuti tichabvisa zvimwe zvisiri kutora nzvimbo yakawanda.
Kuyedza imwe yakaverengwa zvakare
Pane imwezve mukana, asi ndicho chinhu chekupedzisira chatinofanira kuita, mushure mekuyedza nzira mbiri dzakapfuura. Tinoita zvinotevera:
Isu tinovhura iTunes neiyo iPhone, iPod kana iPad yakabatana
Isu hatimise zvese zvatinoda kuwiriranisa, kunze kwekushandisa.
Isu tinomakazve izvo zvatinoda kuwiriranisa.
Isu tinoisa shanduko zvakare.
Kana tikaita nzira nhatu dzakapfuura, tichabvisa zvese kana zvinenge zvese zvirimo zve "vamwe" muTunes.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ini ndinobvisa sei zvemukati zvinoratidzika se "zvimwe" muTunes?
Zvakanaka kwazvo, "unogona kudzima cache yekushandisa" nekuti iwe uchandiudza kuti kubva iOS 8.3 haugone kugadzirisa mafaira kubva pc, usati wabvisa zviri nyore mapacheji neifunbox. Ini chete ndinoziva flipboard iyo inoita kuti iwe uzviite nemaoko.
Kwakanaka sei icleaner yaive ichiuya ...
Iko hakuna kunyorera kweMac kana Win iyo inoita basa iri?
Mune mamwe maforodha mune zvakare cache yeiyo icloud raibhurari, uye kwete kukanganwa nezvemaapps akaita sevlc, mapeji, keyword, manhamba, kugona, izwi, adobe acrobat uye mamwe maunogona kuwedzera mafaera kubva iTunes, iwo mafaera ari zvakare chikamu che «zvimwe»
Pindura kuna Alexito
Mubvunzo? Unodzima sei cache ye fe facebook app?
Handisati ndamboziva kuti sei, ini ndinogara ndichidzima iyo app uye kuidzosera! Ndisati ndashandisa phoneclean asi apple ... Zvakanaka unoziva zvayakaita!
Yakanaka kwazvo Pablo, ndatenda nekugovana.
Mushumo haubatsiri. Bvisa cache yeichi kana icho chishandiso. Asi unozviita sei? Dai vazhinji vedu taiziva kuti tingadai tisina matambudziko emuchadenga uyezve, tingadai tisina kuverenga chinyorwa ichi.
Mhoro, scl. Sezvaunonzwisisa, ini handigone kutaura kuti ese mashandisirwo akachengetwa. Kune zviuru. Mazana ezviuru. Kana vaine sarudzo, inofanirwa kunge iri yezvirongwa. Semuenzaniso, muTeregiramu, iwe unotsvedza kuti ubvise chat uye inokuudza kana iwe uchida kudzima chete cache, asi mu tweetbot zvakasiyana, nekuti zviri mumisangano yeakaundi yega yega Twitter. Unofanira kuzvinzwisisa.
wedzera kuti kana iwe uine jailbreak pane maapplication ayo anongo gadzirisa cache senge iceaner kana seye 25pp app iyo zvakare ine yakakurumidza uye inoshanda cache yekuchenesa EYE kuitira kana uine jailbreak.
Griffin anotangisa chigadziko chitsva kubhadharisa yako Apple Watch ne iPhone panguva imwe chete
IPhone 7 pfungwa ine pamberi pese sekrini